I-Semalt Expert: Lesbarkeit Und Erfolg Gehen Zusammen
Kukho nawuphi na umkhankaso we-intanethi, ukubaluleka kwabaphulaphuli kuyinto ebalulekileyo akukho blogger ongakwazi ukuyihoxisa. Enye yezinto ezibonisa ubungqina obuxhasayo kunye nokwandisa ukufundeka kolwazi lwakho. Ngaphezulu, i-Google yamemezele ukuba ukufaneleka komxholo kuya kuba yinto ebalulekileyo kwi-Google algorithm malunga nokubeka. Ukufunda komxholo wakho, ngoko ke, kuba yinto ebalulekileyo yokubaluleka ngokubhekiselele kwi-Search Engine Optimization (SEO). Amashishini amaninzi aphumeleleyo aneefayile ezikhethekileyo ze-SEO ezibanceda ukuphuhlisa umxholo wesicatshulwa, uchaza impumelelo yewebhusayithi ye-e-commerce - find superannuation fund number. Abasebenzisi kufuneka basebenzise umxholo wokubaluleka kwimimandla eyahlukeneyo njengokunyusa ukufundwa kweblogi yakho.
Kwiimeko ezininzi, umxholo awufundekiyo xa ude kakhulu. Kwiintlobo ezininzi zeblogi umxholo kufuneka ube ngamazwi angama-500 ukuya kuma-700 ukwenza ubungakanani bomxholo wekhasi. Olu bude lunokuba lusezantsi kwezinye iifowuni ezifana nesithuba somboniso weselula. Khumbula uhlaziyo lwe-2017 lwe-Google algorithm luvuza iziza ezinobungozi zeselula. Ukufumana iphepha elinolwazi, umxholo unokuba ngaphezu kwamazwi angama-700. Nangona kunjalo, izithuba ezingama-1300 amagama zide kakhulu ukuba umntu afunde. Uninzi lwabantu olukhangela i-web ludla ukuba luncedo olufutshane. Ukubambisana kwiwebhusayithi yakho kunokuhlaselwa kakubi kwezinye iinzame ze-SEO.
UJason Adler, Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, unikezela ngolu hlobo iindlela ezilandelayo ungalungisa umxholo omude:
Ingaba yinto efanelekileyo yokuphula ulwazi malunga nochungechunge..Ezi zinokubandakanya uluhlu lweziganeko, ngoko ke ukugcina ukubandakanyeka komfundi. Abanye abasebenzisi bakhetha ukubandakanya iziqendu zokuqala kunye nezibalo. Le nsimu inokuvumela umntu ukuba aphule yonke ibakala kwicandelo, apho inxalenye yokuqala kufuneka ibe neengongoma eziphambili zeli nqaku.
Iislayidi zinika i-infographics kumsebenzisi okwenza inkcazo yezinto ezininzi zilula. Ingqondo yomntu iyakhumbula imifanekiso ngokulula ngakumbi kunomxholo obhaliweyo. IiSladeshows zenza inkcazo yenkcazo yolwazi ngendlela eya kwenzeka ngayo. Ngaphezu koko, imibukiso yeslayidi inokufumaneka kwakhona kumxholo wevidiyo, apho izifundo kunye nee-webinars zingaba lula ukuyisebenzisa.
IiVideos zingaboniswa ngcamango enomxholo. Isichukumiso somfanekiso singaba ngaphezu kwamagama amawaka. Le ndlela ayikwazi kuphela ukubandakanya inani elifanelekileyo lomxholo wakho kodwa yenza ukuba umfundi ahlale ekhasini lakho ixesha elide. Ngaphezulu, i-Google ngoku ijonga iividiyo njengomxholo oqhelekileyo. IiVidi zivela kwisiqulatho esingafaniyo esenza ukuba i-website yakho ibe yenyuka. Ukuthumela umxholo wevidiyo kukhululekile kwiindawo ezininzi zewebhu.
Uninzi lwamashishini lunzima ubunzima xa kuvela ekuphuculeni umxholo kubafundi babo. Amaziko amaninzi e-SEO asebenzisa umxholo wabo kwiindawo ezizimeleyo ezingathethi ukuba yimpumelelo kwiwebhusayithi yazo. Ngaphezu koko, njengoko ulwazi luqhubeka luhamba ukusuka kumntu ukuya kumntu, ingqibelelo yesicwangciso sakho sokuthengisa iyanciphisa ixesha. Le ngongoma inokuchazela ukungaphumeleli kwamaphulo athile e-SEO. Esi sikhokelo sinokuzifundela izinto ezinokuphucula umgangatho wezithuba zakho. Ngenxa yoko, abaphulaphuli bakho bangazuza kule mpu melelo kwaye benze amanyathelo amaninzi ngokuphathelele kwendalo. Unokusebenzisa esi sikhokelo ukunyusa impumelelo kwiprojekti yakho yokuthengisa.